ဗလာဒီမာရဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင် & ဆရာအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာဗလာဒီမာရဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင်ဗလာဒီမာရဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင် & ဆရာအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် ဗလာဒီမာရဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင် ဟာ Off comments ဗလာဒီမာရဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင် & ဆရာအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအပေါ်
မှတ်ချက်: ယခုသင့်အပြည့်အဝလည်ပတ် 7-ရက်အခမဲ့အစမ်းရယူပါ!
ဗလာဒီမာ၏ Forex Signals & လမ်းညွှန်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Vladimir's Forex Signal & Mentoring သည် Forex ကုန်သည်များအတွက် #1 အွန်လိုင်းပညာရေး site ဖြစ်သည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲဟူသောဝေါဟာရကိုကြားလျှင်Forex ကနှေးနေရင်မြန်အောင်” သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပိုမိုသိချင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်တော်မသင့်ဖြစ်စေဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး Forex နေရင်မြန်အောင်ဝန်ဆောင်မှုကဘာလဲ?
A Forex နေရင်မြန်အောင်ဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်အခွင့်အလမ်းများအပေါ်သတိပေးချက်များပေးပါသည်။ ဥပမာ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်ကသူ့အကောင့် (သို့မဟုတ်သူ့ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေအကောင့်) အရောင်းအဝယ်ဖြစ်, သူ့စားပွဲခုံမှာထိုင်တော်မူ၏။ အဆိုပါကုန်သည်စျေးကွက်ဝင်သောအခါတိုင်းသူလည်းသူတို့ကိုသူ့ကိုကဲ့သို့တူညီသောအရောင်းအထဲဝငျဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း, သူ့စာရင်းသွင်းသူတစ်ဦးတပ်လှန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ တချို့ကဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးကိုခေါ်ကာ automated စက်ရုပ်ပေး ကုန်သွယ်ရေးမိတ္တူးကူးစက် သို့မဟုတ်တစ် ကုန်သွယ်ရေး Cloner.
ဤသို့သောဝန်ဆောင်မှုသည်ဗလာဒီမာ၏ Forex အချက်အလက်များ & ဆရာ"။
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ် Forex နေရင်မြန်အောင်န်ဆောင်မှုများကိုသုံးပါသင့်သလဲ
သစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်သင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ရှိပါတယ် အချက်ပြန်ဆောင်မှုများ ထွက်ရှိကြောင်းကိုသင်၏အမြတ်အစွန်းအထောက်အကူပြုသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်အောင်မြင်မှုပိုင်ခွင့်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
အရင်ကဆိုရင်များအတွက်: တစ်ဦးတည်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အခြားမည်သည့်အလုပ်အကိုင်ကဲ့သို့ပင်သင်ကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုများကိုထိုကဲ့သို့သော, ဒါကြောင့်, ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိသော်လည်းအန္တရာယ်ကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးခြေလှမ်းများအပေါ် (အချို့ပွဲစားများ ... ယုံကြည်သို့သငျသညျဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်အဘယျသို့ပေမယ့်) ညဥ့်ကိုအုပ်စိုးအောင်မြင်မှုမမြင်ရပါလိမ့်မယ် ဗလာဒီမာ၏ Forex အချက်အလက်များ & ဆရာ, လမ်းအစစ်အမှန်ပညာရှင်များကုန်သွယ်မှုသင်ယူဖို့လက်၌သင်တို့လက်ယူနိုင်ပါတယ်။ Plus အားသင်လက်ျာခြေမအပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်ဒါ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်သို့လိုလားသူများအရောင်းအကော်ပီကူးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်အချိန်မရှိသောသူများအတွက် signal service သည်သင့်တော်ပါသည်။ အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုရောင်းဝယ်မှုကိုနှစ်သက်သောကုန်သည်တစ် ဦး ရှိသည်။ အချိန်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများစွာကိုသက်သာစေပြီး၊ သင့်တွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ရှိခြင်းကြောင့်ရလဒ်ကောင်းများပိုရသင့်သည်။
ဝါရင့်ကုန်သည်များအဘို့: သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်သင်၏မဟာဗျူဟာ၏အမျိုးမျိုးသောအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုအရင်းအမြစ်များကိုပေးစွမ်းရန်တကယ့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွင်း (chat and live trading ခန်းများမှတဆင့်) ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေရန်ကူညီပေးနေသောစိတ်သဘောထားတူသည့်ကုန်သည်များအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
ဤတွင်အတူအားနည်းချက်များနှင့်ဘုံကိစ္စများဖြစ်ကြသည် signal ကိုန်ဆောင်မှု, သင့်အာရုံကိုနှင့်သတိပြုဖို့လိုလိုအပ်သည့်:
hidden အစီအစဉ်များ: အချို့ပွဲစားများကအခမဲ့အချက်ပြပေးသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုဘာကြောင့်ကမ်းလှမ်းတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ရအောင် အခမဲ့အချက်ပြမှုများ သူတို့လေးနက်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ ကိစ္စရပ်အများစုတွင်အဖြေမှာ၎င်းတို့တွင်လျှို့ဝှက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည် - သင့်အားပိုမိုကုန်သွယ်ရန်သင့်အားတွန်းအားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒီညီမျှခြင်းကရိုးရိုးလေးပါ။ သူတို့ကသင့်ကိုအချက်ပြလေလေ၊ ကုန်သွယ်မှုတွေများလေလေ၊ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အဓိကစိတ် ၀ င်စားမှုမှာအချက်ပြမှုအမြောက်အများကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ပို့ရန်ဖြစ်သည် အမြတ်အစွန်းအချက်ပြမှုများ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေအချက်ပြမှုများ၏ဤအမျိုးအချက်ပြမှုများကိုလောကီသားတို့သည်အများအတွက်မကောင်းတဲ့နာမကိုအမှီရာ၌ခန့်ထားပြီ, ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ပေးသူတစ်ဦးအနည်းငယ်ရှားပါး paid အချက်ပြမှုများကိုပံ့ပိုးပေးရှိပါတယ်။
အချိန်အခက်အခဲ: များစွာသော signal service များသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုတစ်နေ့တာနီးကပ်စွာထားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင် signal တစ်ခုရတိုင်းစျေးကွက်သို့ချက်ချင်းဝင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ဤပြissueနာကိုaဟုခေါ်သောအရာကိုသုံးခြင်းဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည် ကုန်သွယ်ရေးမိတ္တူယင်းမှတိုက်ရိုက်က၎င်း၏ကုန်သွယ်ပညတ်တော်တို့ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ automated စက်ရုပ်ဖြစ်သော အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကုန်သည်.
ကောင်းသောအချက်ပြကောင်းသောကုန်သည်များထံမှလာ: ကံမကောင်းစွာပဲ, အ Forex စက်မှုလုပ်ငန်း scam များနဲ့မရိုးမသားရောင်းချသူနှင့်ပြည့်ဝ၏။ ကုန်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အချက်ပြပေးလွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်တကယ်အမြတ်အစွန်းများကိုထားတဲ့အချက်ပြပေးသင်တန်းကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာရင်းဇယားကုန်သည်များ 95% Forex အတွက်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာပံ့ပိုးပေးအချက်ပြသက်ဆိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မစ်ရှင်အမှန်တကယ် Forex အတွက်ငွေရှာသူကို signal ကိုပံ့ပိုးပေးသူများ 5% ထဲကတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။
တရားဝင်ဗလာဒီမာရဲ့ Forex Signals & Mentoring site ကိုသွားပါ
အောက်တိုဘာလဇန်န ၀ ါရီလ 2015 မှယနေ့အထိဗလာဒီမာပူ၏ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းအပြည့်အစုံကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Vladimir ၏ Forex Signal & Mentoring Program - ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်။ ဘာကြောင့်လဲ
လေဆာ - တိကျသောအချက်ပြမှု4အရင်းအမြစ်များ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမိတ္တူများ၊ တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ခန်း၊ နေ့စဉ်စျေးကွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာဝဘ်ဆိုက်များ၊ မျှဝေထားသောအသင်း ၀ င်၏စစ်မှန်သောအကောင့်နှင့်အခမဲ့ MT4 ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။
ဗလာဒီမာ၏ Forex အချက်အလက်များ & ဆရာ အမှန်တကယ်တွင်သူ၏“ virtual trading office” သည်သူလုပ်သောကုန်သွယ်မှုအားလုံးကိုသတိပေးသည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုနောက်လိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ စျေးကွက်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ သူ၏နည်းစနစ်များကိုသင်ကြားပေးခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အဆိုပါ ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများ ဗလာဒီမာ၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၊ အပိုဆုများနှင့် guest ည့်သည်ကုန်သည်များအပါအဝင်ရင်းမြစ်များစွာမှဆင်းသက်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသင်းဝင်များသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ဒါပေမဲ့အဲဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အတူတူကုန်သွယ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောလူများ၏အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗလာဒီမာကနေ့တိုင်းအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်တိုက်ရိုက်အရောင်းအ ၀ ယ်အသင်း ၀ င်များ၏စကားပြောခန်းရှိသည်။ ဗလာဒီမာကသူ၏စီးပွားဖြစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုသင်ပေးသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသည်။
Vladimir ၏ Forex Signal များနှင့်လမ်းညွှန် - ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏အရေးကြီးသောလက္ခဏာများ -
ဗလာဒီမာ Ribakov ထံမှ signals: ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဝါရင့်ကုန်သည်ဖြစ်ခြင်း, ဗလာဒီမာကုန်သွယ်မှု:
ထိုကဲ့သို့သောရေနံ, ရွှေ, ဂျုံအဖြစ်သတ္တု & Commodities
ထိုအထိုကဲ့သို့သော S & P, NASDAQ, FTSE, DAX, Nikkei အဖြစ် indices
အချက်အလက်များချက်ချင်း MetaTrader တွင်သတိပေးချက်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ ထို့အပြင်အီးမေးလ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသင်း ၀ င်များ၏websiteရိယာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းရောက်ရှိသည်။ အသင်း ၀ င်များ၏areaရိယာသည်ပညာရေးဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များနှင့်မျက်နှာပြင်များကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။
ဗလာဒီမာလည်းထောက်ပံ့ပေး ကုန်သွယ်ရေး Cloner အရာသည်အသင်း ၀ င်အကောင့်ထဲသို့ကုန်သွယ်မှုအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ကူးယူပေးသည်။
Vladimir ၏ Forex အချက်အလက်များနှင့်လမ်းညွှန် - Forex Traders များအတွက် #1 အွန်လိုင်းပညာရေး
ဧည့်သည် Trader: အဖွဲ့ဝင်များမှမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အချက်ပြမှုများ၏နောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုအရင်းအမြစ်တစ်ဦးဧည့်သည်ကုန်သည်များထံမှဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားကလိုလားကုန်သည်များပြီးသားဧည့်သည်ကုန်သည်များအဖြစ် featured ခံရဖို့ဝန်ခံကြ၏။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ဦးချင်းစီဧည့်သည်ကုန်သည်သူ / သူမ၏စတိုင်လ်များနှင့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီရောင်းဝယ်ဖောက်လိမ့်မယ်။ ထိုအခါသူတို့ကိုထံမှပိုမိုလေ့လာချင်ပါတယ်တဲ့သူဆရာအဖွဲ့ဝင်များကကူညီပေးပါမည်။
အဆိုပါ ဧည့်သည် Trader နေရင်မြန်အောင် ကုန်သွယ်ရေးမိတ္တူ၊ အီးမေးလ်နှင့် MT4 တိုက်ရိုက်သတိပေးချက်များမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ ပြီးတော့အဖွဲ့ ၀ င်တွေရဲ့insideရိယာထဲမှာသီးခြား panel တစ်ခုအောက်မှာရှိတယ်။
သဟဇာတပုံစံများနေရင်မြန်အောင်: Vladimir Ribakov ၏ပုံမှန်အချက်များအပြင်သူသည် Harmonic Patterns analysis မှရရှိသောအပိုဆုအချက်များကိုလည်းပေးလိမ့်မည်။ ပုံစံများသည်အထူးပြုဖီဘိုနာချီဆန်းစစ်ချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ ဤအချက်ပြမှုသည်မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွန့်စားမှု / ဆုအချိုးအစားရှိသည်။
မျှဝေသုံးစွဲသူများ၏တကယ့်ငွေအကောင့် panel နှင့်သင်္ကေတများ - ဒါဟာအဖွဲ့ဝင်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးတစ်ဦးသီးသန့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအယူအဆအသစ်ဖြစ်၏, ဒါကြောင့်အချို့သောရှင်းလင်းချက်ထိုက်တန်ပါတယ်။
ဗလာဒီမာရဲ့ Forex Signals & Mentoring မှဘယ်လိုအကျိုးရမလဲ
ရည်ရွယ်ချက်မှာအသင်း ၀ င်များ၏အလားအလာရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အမှန်တကယ်ငွေမည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ကိုပညာပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒီအကောင့်ဟာဗလာဒီမာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီးသူကသူ့ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေတွေကိုပုံမှန်ငွေသွင်းနေပါတယ်။ အကောင့်ကိုအဖွဲ့ ၀ င်ဘုတ်အဖွဲ့ကကုန်သွယ်လိမ့်မယ်။ ဗလာဒီမာ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်အဖွဲ့သည်ကုန်သွယ်မှုပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်အဖွဲ့ ၀ င်များ၏ပညာရေးအကျိုးအတွက်သူတို့၏နည်းစနစ်များကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုရန်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဝေဖန်ကို Reverse အဆင့်ဆင့်: ဤအချက်များသည်ဗလာဒီမာသည်သူ၏သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ထောက်ပံ့ပေးသောစျေးကွက်များသို့ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုထူးခြားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသောအဆင့်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အသင်းဝင်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသော MT4 ညွှန်ပြချက်အနေဖြင့်လည်းရရှိနိုင်သည်။
ထရေးဒင်း ROOM တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်: တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်, စျေးကွက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ကုန်သွယ်မှု Setup ကိုရှာဖွေနေသည်အဖွဲ့ဝင်များကရန်သူ၏တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်အခန်းတစ်ခန်းဖွင့်လှစ်။
Daily သတင်းစာစျေးကွက်သုံးသပ်ချက်များ: ဗလာဒီမာသည်နံနက်ယံ၌နေ့စဉ်စျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ထိုးထွင်းသိမြင်သောဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအသင်း ၀ င်များ၏inရိယာတွင် (နှင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွင်လည်း) ရရှိနိုင်သည်။
Webinars: အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်, အင်္ဂါများကသူ၏ကုန်သွယ်နည်းလမ်းများနှင့်သဘောတရားများကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်သွန်သင်မည်သူကိုဗလာဒီမာအတူအွန်လိုင်းမှ webinar တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
အခမဲ့ Programming ဝန်ဆောင်မှု: ဗလာဒီမီယာ၏နောက်လိုက်များသည်ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်နှင့်အယူအဆကိုမကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး (FX စက်ရုပ်)။ သို့သော်တစ်ဦး MetaTrader ညွှန်ပြချက်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသို့သူတို့ကိုငါ coding အလွန်အထူးပြုလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတိုငျအောငျ, တစ်ခုတည်းသော options နှစ်ခုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်တစ်ဦးဝိဉာဉ်များအတွက်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာဆပ်ဖို့ဖြစ်စေခဲ့သညျ။ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏမထက်တဲ့ယုန်ကလေး, အပျော်တမ်းအရည်အသွေးရလဒ်ဖြစ်ထွန်းသောအင်တာနက်ဖိုရမ်များအတွက်မျက်နှာသာမေးကြည့်ပါ။
Vladimir's Forex Signal & Mentoring - နောက်ထပ်ဘာတွေတောင်းလို့ရမလဲ။
ယခုဤအရာများသည်ဗလာဒီမာ၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ပြောင်းလဲသွားပြီ။ သူတို့စိတ်ကူးများကိုဗလာဒီမာ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် coding အဖွဲ့ကအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဗလာဒီမာအခမဲ့သူ့ coding အသင်းကမ်းလှမ်းကတည်းကသူအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များမှရလဒ်ရရှိနိုင်စေရန်ကတိပေးထားတယ်။
ကောက်ချက်ချရန်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကုန်သည်များ Forex & ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး၏နောကျအဆငျ့သို့သူတို့ကိုငါယူပြီးတစ်ဦးကောင်းစွာသိကြပြီးအလွန်နောက်တော်သို့လိုက်ကုန်သည်ကစီမံခန့်ခွဲ, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကုန်သွယ်လိုအပ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးတည်း-stop-ဆိုင်ရှိသည်။ ဒီတော့ဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရိုက်အကောင့်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပြုသဘောဖြစ်ခဲ့သည်။
ပေါ်မှာရှိသမျှသောကုန်သွယ်မှုဒေတာ ဗလာဒီမာ၏ Forex အချက်အလက်များ & ဆရာ က်ဘ်ဆိုက်ကို real-time နှင့်အပြည့်အဝပွင့်လင်းသည်။
သုံးပြီး၏အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ် ဗလာဒီမာ၏ Forex အချက်အလက်များ & ဆရာ တခြားပလက်ဖောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျှမျှတတနိမ့်သည်။
ယခုသင့်အပြည့်အဝလည်ပတ် 7-ရက်အခမဲ့အစမ်း (တစ်လလျှင်ထို့နောက် $ 97) ရယူပါ!
ဗလာဒီမာရဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင် & ဆရာ
ဗလာဒီမာရဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင် & ဆရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဗလာဒီမာရဲ့ Forex နေရင်မြန်အောင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း